Mashruuca Balaarinta Dekadda ee Laatiin Ameerika Ayaa Isticmaalaya Laba Dhaayadood Oo Ellicott ah
Laba Shahaadooyin Ellicott Oo Ku Saabsan Mashruuca Balaarinta Dekadaha Ee Latin America
Laba Ellicott jeexan jeexan jeexan hadda waxaa loo adeegsadaa ballaarinta deked weyn oo ku taal Latin Amerika. Tani waxay qayb ka tahay mashruuc lagu kordhinayo awoodda maaraynta konteenarrada dekedda iyo in la dejiyo maraakiibta Post-Panamax. Ceelkii ugu horreeyay ee Ellicott, oo ah taxane 370 ah oo leh 12 ″ x 10 ″ (300 x 250 mm) iyo 440 HP (328 kW) oo wadarta korantada la rakibay ah, ayaa ka shaqeynayay dekeddan muddo ka badan lix bilood. Dooxadan 370 waxa dhowaan ku soo biiray taxane 670 qod ah, oo leh 14 ″ x14 ″ (350 x 350 mm) iyo 800 HP (597 kW) oo wadar awood ah. Ellicott wuxuu dhowaan awooday inuu soo qabto sawir gacmeedyo of 670 Dragon dredge goobta mashruuca. Labada weerrarba waxay hadda ka shaqeynayaan qotodheer aagagga loogu talagalay marinka cusub.
370 iyo 670 waa biyo-qabadyo la qaadan karo, laakiin sidoo kale waa kuwo ruug-dheer oo la isku halleyn karo - oo ku habboon dhammaan noocyada codsiyada qulqulaya oo ay ku jiraan tuubbada dekeddu. Iyagu waa qulqulka ugu awoodda badan cabirkaan xajmiga ah.
Dhaqan ahaan, mashaariicda ballaarinta dekedaha sida tan waxaa loo adeegsadaa iyada oo loo adeegsanayo tuubbooyinka waaweyn ee nuugida dareerayaasha (TSHD) ama maraakiibta kale ee iskood isu warshadeeya. Mararka qaarkooda, qodista yar yar ee la jeexjeexi karo ee jeexjeexa ayaa ah xalka ugu fiican awgood, helitaankooda, wax soo saarkooda iyo qiime aad u hooseeya Faa'iidooyinkaas oo ah qodista goynta la qaadi karo ee xamuulka ah waxay sidoo kale quseysaa qulqulka dayactirka dekada, gaar ahaan marka qashin qubidda loo sameeyo si joogto ah.
Muuqaal dheeri ah ka daawo muuqaalka a Ellicott 1870 Dragon dredge oo laga bilaabay mashruuc kale Koonfurta Ameerika.